Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5.4 mpiara-miasa amin'ny mahery
Miara-miasa dia afaka mampihena ny vola lany sy hampitombo ny maridrefy, fa afaka manova ny karazana mpandray anjara, fitsaboana, ary ny vokatra izay azonao ampiasaina.
Ny fomba hafa anaovana izany dia miara-miasa amin'ny fikambanana mahery vaika toy ny orinasa, governemanta, na ONG. Ny tombony amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa dia ny fahafahan'izy ireo mamela fanandramana izay tsy vitanao irery. Ohatra, iray amin'ireo fanandramana izay holazaiko aminareo eto ambany dia nahitàna mpandray anjara 61 tapitrisa - tsy misy mpikaroka tsirairay afaka hahatratra izany ambaratonga izany. Amin'izay fotoana izay ny fiaraha-miasa mampitombo ny zavatra azonao atao dia manery anao koa izy. Ohatra, ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy hamela anao hanao fanandramana mety hanimba ny orinasa na ny lazany. Miara-miasa amin'ny mpiara-miasa dia midika ihany koa fa rehefa tonga ny fotoana hamoahana dia mety hianjadian'ny "famerenana indray" ny valim-pifidianana ianao, ary mety hanandrana hanakana ny famoahana ny asanao koa ny mpiara-miasa sasany raha toa ka ataony ho ratsy izany. Farany, ny fiaraha-miasa koa dia mahazo ny vola mifandraika amin'ny fampivoarana sy ny fitazonana izany fiaraha-miasa izany.
Ny fanamby fototra tsy maintsy entina hanatsarana ireo fiaraha-miasa ireo dia ny fomba fandanjana ny tombontsoan'ireo antoko roa ireo, ary fomba iray mahasoa hieritreretana mikasika izany fifandanjana izany dia ny Quadrant Pasteur (Stokes 1997) . Heverin'ny mpikaroka maro fa raha miasa amin'ny zavatra azo tsapain-draharaha izy ireo-zavatra izay mety hahaliana ny namana iray-dia tsy afaka manao ny tena siansa izy ireo. Izany toe-tsaina izany dia mahatonga azy io ho sarotra ny hamorona fiaraha-miasa mahomby, ary mitranga koa izany ho diso tanteraka. Ny olana amin'ny fomba fisainana dia aseho amin'ny fomba mahatalanjona amin'ny fikarohana momba ny fikarohana momba ny biologista Louis Pasteur. Raha niasa tao amin'ny tetikasa fananganana komitim-pivoarana mba hivadika toaka be dia be ny Pasteur, dia nahita kilasy iray mikrôba mikraoba vaovao izay nitarika ho amin'ny aretina mikraoba. Nahavaha olana lehibe iray io fisehoan-javatra io - nanampy tamin'ny fanatsarana ny dingam-pandrefesana izany - ary nitarika ho amin'ny fandrosoana ara-tsiansa lehibe izany. Noho izany, fa tsy mieritreritra ny fikarohana amin'ny fampiharana azo ampiharina amin'ny fifanoherana amin'ny fikarohana ara-tsiantifika marina, dia tsara kokoa ny mieritreritra ireo hevitra roa ireo. Ny fikarohana dia mety hamporisihina amin'ny fampiasana (na tsia), ary ny fikarohana dia afaka mitady fahalalana fototra (na tsia). Raha ny marina, ny sasany amin'ireo fikarohana toa an'i Pasteur dia mety ho azo ampiasaina amin'ny alalan'ny fampiasana sy ny fitadiavana ny fototry ny fahatakarana (sary 4.17). Ny fikarohana ao amin'ny Quadrant's Pasteur-fikarohana izay manatratra tanjona roa-dia mety tsara ho an'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpikaroka sy ny mpiara-miasa. Noho ny antony, dia hamaritra fanadihadiana roa miaraka amin'ny fiaraha-miombon'antoka aho: iray amin'ny orinasa iray ary iray amin'ny ONG.
4.17: Quadrant Pasteur (Stokes 1997) . Raha tokony hieritreritra ny fikarohana toy ny "fototra" na "nampiharina", dia tsara kokoa ny mieritreritra azy io toy ny famporisihana amin'ny fampiasana (na tsia) ary ny fikatsahana ny fahalalana fototra (na tsia). Ohatra iray amin'ny fikarohana izay ampiasaina amin'ny alalan'ny fampiasana sy ny fitadiavana ny fototry ny asa dia ny asa nataon'i Pasteur amin'ny famerenana ny ranom-boasary ho lasa toaka izay mitarika ho amin'ny aretina mikraoba. Izany no karazana asa izay mifanentana indrindra amin'ny fiarahamiasa miaraka amin'ny mahery. Ohatra avy amin'ny asa izay ampiasaina amin'ny fampiasana fa tsy mitady fahalalana fototra avy amin'i Thomas Edison, ary ohatra momba ny asa izay tsy manosika amin'ny fampiasana, fa mitady ny fahatakarana avy amin'i Niels Bohr. Jereo Stokes (1997) ho an'ny adihevitra misimisy kokoa mikasika io rafitra io sy ny tsirairay amin'ireo tranga ireo. Nampifanarahina tamin'ny Stokes (1997) , faha-3.5.
Orinasa goavana, orinasa lehibe teknika, dia namolavola fotodrafitrasa mahavariana ho an'ny fanandramana fanandramana sarotra. Ao amin'ny orinasa teknika, ireo fanandramana ireo dia matetika antsoina hoe A / B fitsapana satria izy ireo dia mampitaha ny fahombiazan'ny fitsaboana roa: A sy B. Ny fanandramana toy izany matetika dia mihazakazaka amin'ny zavatra toy ny fitomboana tsikel-tsakafo amin'ny dokam-barotra, fa ny foto-drafitrasa fanandramana ihany koa Azo ampiasaina hanaovana fikarohana izay manatsara ny fahatsapana siantifika. Ohatra iray mampiseho ny mety ho karazana fikarohana toy izany dia fanadihadiana notontosain'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpikaroka ao amin'ny Facebook sy ny Oniversiten'i Kalifornia, San Diego, momba ny fiantraikan'ny hafatra samihafa momba ny fihenan'ny mpifidy (Bond et al. 2012) .
Ny 2 Novambra 2010-ny andron'ny fifidianana Kongresy Amerikana-ireo mpampiasa Facebook 61 tapitrisa izay niaina tany Etazonia ary 18 taona na mihoatra dia nandray anjara tamin'ny fanandramana momba ny fifidianana. Rehefa nitsidika ny Facebook dia nampiarahina tamin'ny iray tamin'ireo vondrona telo ireo mpampiasa azy ireo, izay namaritra hoe inona ny faneva (raha misy) dia napetraka eo an-tampon'ny News Feed (sary 4.18):
fampandrenesana momba ny fifidianana amin'ny bokotra "Voafidy" ary counter (Info)
fampahalalam-baovao momba ny fifidianana amin'ny bokotra "Voako" sy ny lisitra misy anarana sy ny sarin'ireo namany izay efa efa nanindry ny "Izaho nifidy" (Info + Social)
Ny Bond sy ny mpiara-miasa dia nandalina ny vokatra roa lehibe: nitatitra ny fitondrantenan'ny fifidianana sy ny fitondran-tena mifidy. Voalohany, hitan'izy ireo fa ny olona ao amin'ny vondrona Info + Social dia tokony ho roa isan-jato ny isa azo oharina amin'ny olona ao amin'ny vondrona Info mba hikirakiran'ny "Izaho nifidy" (eo amin'ny 20% eo amin'ny 18%). Ankoatr'izay, taorian'ny fandinihan'ireo mpikaroka ny angon-drakitra misy azy ireo amin'ny firaketana fifidianana ampahibemaso efa ho enina tapitrisa eo ho eo, dia nahatsikaritra fa ny olona ao amin'ny vondrona Info + Social dia 0.39 isan-jaton'ny teboka faran'izay azo safidy noho ny ao amin'ny vondrona mpitantana ary ny olona ao amin'ny vondrona Info dia toy ny mahazatra ny mifidy raha ny ao amin'ny vondrona mpitantana (sary 4.18).
Sary 4.18: Ny vokatra avy amin'ny fanandramana misimisy kokoa amin'ny Facebook (Bond et al. 2012) . Ireo mpandray anjara ao amin'ny vondrona Info dia nifidy tamin'ny tahan'ny mitovy amin'ny an'ny vondrona mpitantana, fa ny olona ao amin'ny vondrona Info + Social dia nifidy tamin'ny taham-pitombo avo lenta. Ny bara dia maneho antontam-pahatokisana ho an'ny 95%. Ny vokatra ao amin'ilay grafika dia ho an'ireo mpandray anjara enina tapitrisa eo ho eo izay mifanandrify amin'ny fisoratana firaketana. Adapted from Bond et al. (2012) , sary 1.
Ny vokatr'io fanandramana io dia mampiseho fa ny hafatra an-tserasera an-tserasera dia mahomby kokoa noho ny hafa ary ny tombantomban'ny mpikaroka dia mety hiankina amin'ny vokatr'izany ny fifidianana na ny fifidianana marina. Ity fanandramana ity dia indrisy fa tsy manome soso-kevitra momba ireo rafitra izay ahafahan'ny fampahalalam-baovao sosialy-izay mpikaroka maromaro no nantsoina hoe "face-pile". Angamba ny fampahalalam-baovao sosialy dia nampitombo ny mety ho fahitan'ny olona iray ny sora-baventy na ny fampitomboana ny mety hitrangan'ny olona iray izay nanamarika na ny roa tonta. Noho izany, ity experiment ity dia manome fikarohana mahaliana izay mety hikaroka ireo mpikaroka hafa (jereo ohatra: Bakshy, Eckles, et al. (2012) ).
Ankoatra ny fandrosoana ny tanjon'ireo mpikaroka, ity fanandramana ity dia nandroso ihany koa ny tanjon'ny fikambanana mpiara-miasa (Facebook). Raha manova ny fitondran-dàlana nodidiana tamin'ny fifidianana hividianana savony ianao, dia ho hitanao fa ilay rafitra dia manana rafitra mitovy amin'ny fanandramana hanombanana ny vokatry ny dokambarotra an-tserasera (jereo ohatra ny RA Lewis and Rao (2015) ). Ireo fikarohana momba ny fahombiazan'ny doka ireo dia matetika mandrefy ny fiantraikan'ny fampisehoana amin'ny dokambarotra an-tserasera-ny fitsaboana ao Bond et al. (2012) dia dokam-barotra ho an'ny fifidianana - amin'ny fihetsika ivelan'ny aterineto. Noho izany, ity fikarohana ity dia afaka manatsara ny fahaiza-manaon'ny Facebook mba handinihana ny fahombiazan'ny dokambarotra an-tserasera ary afaka manampy ny Facebook handresy lahatra ireo mpizarazara izay mety hahitana ny dokambarotry ny Facebook amin'ny fiovan'ny fihetsikao.
Na dia nifantoka tamin'ny ankapobeny aza ny tombotsoan'ny mpikaroka sy ny mpiara-miasa tamin'ity fandinihana ity, dia tao anatin'ny fihenjanana ihany koa izy ireo. Ny fametrahana ny mpandray anjara amin'ny vondrona telo, ny Info, ary ny Info + Social dia tena tsy misy mifandanja: 98% ny lasitra nomena ho an'ny Info + Social. Ity famatsiam-bola tsy amonoana ity dia tsy misy fiantraikany amin'ny statistika, ary ny famatsiam-bola tsara kokoa ho an'ireo mpikaroka dia mety ho ny ampahatelon'ny mpandray anjara ao amin'ny vondrona tsirairay. Saingy ny famatsiam-bola tsy nifandanjana dia nitranga satria tian'ny Facebook ny tsirairay handray ny Info + Social fitsaboana. Soa ihany, ireo mpikaroka dia nandresy lahatra azy ireo mba hitazona 1% noho ny fitsaboana mifandraika sy 1% amin'ny mpandray anjara ho an'ny vondrona mpitantana. Raha tsy misy ny vondrona mpitantana, dia mety tsy ho vitany ny fandrefesana ny vokatr'ilay fitsaboana Info + Social satria izy io dia mety ho "fifehezana sy fitandremana" fanandramana fa tsy fanandramana mifandona mifandona. Ity ohatra ity dia manome lesona sarobidy azo tsapain-tanana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa: indraindray ianao mamorona fanandramana amin'ny fandresen-dahatra olona iray hanolotra fitsaboana ary indraindray ianao mamorona fanandramana amin'ny fandresen-dahatra olona iray tsy hanafatra fitsaboana (izany hoe mamorona vondrona mpitantana).
Ny fiaraha-miasa dia tsy voatery hampiditra orinasa teknika sy A / B amin'ny mpandray anjara an-tapitrisany. Ohatra, Alexander Coppock, Andrew Guess, sy John Ternovski (2016) niara-niasa tamin'ny ONG iray momba ny tontolo iainana - ny Ligy ho an'ny Conservation Voters - mba hitarika fanandramana hanandramana paikady samihafa amin'ny fampiroboroboana ny fanentanana sosialy. Ireo mpikaroka dia nampiasa ny kaonty Twitter an'ny ONG mba handefa ireo bitsika ho an'ny daholobe sy ireo hafatra tsy miankina mivantana izay niezaka ny ho karazana famantarana samihafa. Dia norefesin'izy ireo hoe iza amin'ireo hafatra ireo no mahomby indrindra amin'ny famporisihana ny olona hanao sonia fanangonan-tsonia ary hamerina hibitsika momba ny fangatahana.
Tabilao 4.3: Ohatra amin'ny fanandramana mampandray anjara ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpikaroka sy ny fikambanana
Ny famoahana ny vaovao amin'ny Facebook ho an'ny fizarana vaovao Bakshy, Rosenn, et al. (2012)
Ny vokatry ny tsy fitovian-kevitra ampahany amin'ny fitondran-tena amin'ny tranonkala dating Bapna et al. (2016)
Ny fiantraikan'ny angovo ao an-trano momba ny herinaratra Allcott (2011) ; Allcott and Rogers (2014) ; Allcott (2015) ; Costa and Kahn (2013) ; Ayres, Raseman, and Shih (2013)
Ny fiantraikan'ny rindram-baiko amin'ny viriosy Aral and Walker (2011)
Ny fiantraikan'ny fampielezana ny diffusion SJ Taylor, Bakshy, and Aral (2013)
Ny vokatry ny fampahalalam-baovao amin'ny dokam-barotra Bakshy, Eckles, et al. (2012)
Ny endriky ny katalaogy matetika amin'ny varotra amin'ny alalan'ny katalaogy sy amin'ny Internet ho an'ny karazana mpanjifa samihafa Simester et al. (2009)
Ny vokatry ny fampahalalana malaza momba ny asa mety ho an'ny asa Gee (2015)
Ny vokatry ny fanombohana voalohany amin'ny laza Muchnik, Aral, and Taylor (2013)
Vokatry ny votoatin'ny hafatra amin'ny hetsika politika Coppock, Guess, and Ternovski (2016)
Amin'ny ankapobeny, ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny hery dia ahafahanao miasa amin'ny ambaratonga izay sarotra ho an'ny hafa, ary ny latabatra 4.3 dia manome ohatra hafa momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpikaroka sy ny fikambanana. Ny fifaneraserana dia mety ho mora kokoa noho ny fananana ny fanandramanao manokana. Fa ireo tombony ireo dia tonga amin'ny tsy fahampiana: ny fiaraha-miasa dia afaka mametra ny karazana mpandray anjara, fitsaboana ary ny vokatra azonao hianarana. Ankoatra izany, ireo fiaraha-miombon'antoka ireo dia mety hitarika ho amin'ny fanamby ara-ethika Ny fomba tsara indrindra ahafantarana ny fotoana ahafahana miara-miasa dia ny mahita ny tena olana izay azonao vahana raha manao siansa mahaliana ianao. Raha tsy ampiasaina amin'ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao ianao, dia mety ho sarotra ny mamantatra ireo olana ao amin'ny Quadrant Pasteur, saingy amin'ny fampiharana, dia manomboka mahatsikaritra azy ireo hatrany.